लद्दाख भि’डन्तमा के चिनियाँ सेना पनि मा,रि,ए,का हुन् ? भयो यस्तो खुलासा – Jagaran Nepal
लद्दाख भि’डन्तमा के चिनियाँ सेना पनि मा,रि,ए,का हुन् ? भयो यस्तो खुलासा
एजेन्सी। चीन-भारत सीमा नजिक गल्वान उपत्यकामा जुन १५ मा २० भारतीय सैनिकको ज्या,,न जाने गरी भएको झ’ड’प,मा आफ्ना दुई चिनियाँ सैन्य अधिकारी मा,,रि,एको खुलासा भएको छ। चीनले मा,रि,ने,मा एक कमान्डिङ अफिसर र बटालियनका अर्का अफिसर भएको स्वीकार गरेको छ।
टाइम्स अफ इण्डियामा प्रकाशित समाचारमा चिनियाँ पक्षले यस हताहतीका बारेमा घ,ट,ना, लगत्तै भारतीय पक्षलाई जानकारी दिएको भएपनि हालै मात्र समाचार सार्वजनिक भएको उल्लेख छ। घ,ट,ना,मा आफ्ना सैन्य अधिकारी मा,रि,ए,को चीनको स्वीकारोक्तिलाई महत्वपूर्ण मा,नि,ए,को छ। यसलाई सम्भवतः भियतनामसँग सन् १७७९ मा भएको यु,द्ध,प,छि भएको पहिलो सैन्य ह,ता,ह,ती भएको मानिएको छ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भने हालसम्म घ,ट,ना,मा भएको कुनैपनि ह,ता,ह,ती,लाई स्वीकार गरेको छैन। जुन १५ भारतीय सेनाले आफ्नो दाबी गरिएको भू-भागमा चिनियाँ पक्षले निर्माण गरेको भौतिक संरचना भ,त्का,ए,पछि दु,बै,प,क्षबीच हिं’स्र’क झ’ड’प भएको थियो।
घ,ट,ना,मा भारतका क,मा,न्डि,ङ अ,फि,सर सहित २० जनाको ज्या,,न गएको थियो। घ,ट,ना लगत्तै चिनियाँतर्फ पनि ह,ता,ह,ती, भएको बताइएको भएपनि कति संख्यामा ह,ता,ह,ती भयो भन्ने बारेमा कुनै जानकारी सार्वजनिक हुनसकेको थिएन।
यस्तै चीन र अमेरकाबीच ग,हि,रिँ,दै गएको त,ना,व संसारभरीका लागि कोरोना भाइरस म,हा,मा,री,भ,न्दा पनि ठूलो समस्या हुनसक्छ । यस्तो मान्यता चर्चित अर्थशास्त्री तथा कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जेफ्री स्या,क्स,को हो ।
स्याक्सले बीबीसीसँगको कुराकानीमा संसार ‘कसैको नेतृत्व बिना ठूलो वि,ना,श,’ को स्थितीमा रहने बताए । दुई सुपरपावरका बीच बढ्दो दुरीका कारण यस्तो समस्या बढ्ने उनले चे,ताव,नी दिएका छन् । अमेरिका–चीनबीच बिग्रदोँ सम्बन्धका लागि जेफ्री स्याक्स अमेरिकी प्रशासन जिम्मेवार भएको मान्यता राख्छन् ।
बीबीसी एशिया बिजनेस रिपोर्टलाई दिएको आफ्नो अन्तरवार्तामा उनले भने, ‘अमेरिका एक साझेदारी शक्ति हो, सहयोगी होइन । यो त्यस्तो शक्ति हो जो चीनसँग एउटा शीतयुद्धको स्थिती चाहन्छ । यदि यस्तै प्रकारको नीति रहे हामी कहिल्यै पनि पहिले झैं सामान्य स्थितीमा फर्कन पाउने छैनौं । हामी ठूलो ,वि,वा,द र ख,त,रा,मा उल्झिनेछौं ।’
स्याक्सको बयान यस्तो समयमा आएको हो जब चीन र अमेरिकाबीच व्यापारसमेत थुप्रै मो,र्चा,मा त,ना,व बढिरहेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले वाल स्ट्रिट जर्नललाई दिएको एक अन्तरवार्तामा चीनमाथि नि,शा,ना साँधेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘सम्भव छ कि चीनले संसारभरी भाइरस फै,ला,उ,न मद्दत गरेको छ । कि,न,भने ऊ आफ्नो प्रतिस्पर्धी देशको अर्थव्यवस्था ध्व,स्त पा,र्न चाहन्छ । ’
ह्वा,वेसमेत चीनका थुप्रै कम्पनी अमेरिकाको निशानामा छन् । अमेरिकाले चीनले ह्वावेको प्रयोग ग्राहकको जा,सु,सीका लागि गरिरहेको आ,रो,प लगाइसकेको छ । चीन र ह्वावे दुबैले यी आ,रो,प खण्डन गरेका छन् ।
यद्यपि, अमेरिकाका पूर्व रक्षा सल्लाहकार जोन बालटनले आफ्नो नयाँ किताबमा अमेरिकी राष्ट्रपतिको यो क,डा व्यवहार पुनः चुनाव जित्ने रणनीति मात्रै भएको बताएका छन् । प्राध्यापक स्याक्स पनि ह्वावेमाथि निशाना साँध्नुको पछाडि सुरक्षासँग सम्बन्धित कुनै पनि कारण नभएको बताउँछन् ।
‘अमेरिका फाइभजीको रेसमा पछि परेको छ, एक नयाँ डिजिटल अर्थव्यवस्थाका लागि प्रविधि अत्यधिक महत्वपूर्ण छ । ह्वावेले संसारभरीको मार्केटमा आफ्नो सेयर बढाउँदै गएको छ । मेरो मान्यता अनुसार अमेरिकाले ह्वावे संसारका लागि खतरा भएको भन्दै झु,टो फै,ला,यो र आफ्ना सहयोगीमाथि ह्वा,वेसँग सम्बन्ध तो,ड्न द,बा,ब सिर्जना गर्यो ।’
चीनको विवाद अमेरिकासँग मात्रै होइन । भारत–चीन सीमामा पनि त,ना,व बढेको छ । गत हप्ता एलएसीमा भएको मु,ठ,भे,ड,मा २० भारतीय जवानको मृ,,त्यु भयो । चीनले नेपाल, पाकिस्तान, श्रील,ङ्का र म्यान्मारमा अत्यधिक लगानी गरेको छ । य,सलाई भारतको प्र,भा,व,लाई कम गर्ने को,सिको रु,पमा हे,रिएको छ ।,
स्याक्सका अनुसार चीनको बढदो द,ब,द,बा अन्य एशियाली मुलुकका लागि समस्याको कारण हो, विशेषगरी तब जब चीनले शान्ति र सहयोगसहित अघि बढ्न चाहन्छ भनेर आश्वासन दिने कोसिस गर्दैन ।ची,नले ड,र क,म गर्नका लागि थप को,सिस गरिरहेको छ ’मेरो जवाफ हो, ‘पक्कै पनि ।’स्याक्स भन्छन्, ‘ठूलो निर्णय अब चीनको हा,तमा छ । यदि चीनले एक सफ्ट पावरले झैं सहयोग गरे, कू,ट,,नीतिक, क्षेत्रीय सहयोगी र सबै पक्षलाई समेटेर लिएर अघि बढे मलाई लाग्छ एशियाको भविष्य उज्ज्वल छ, किनभने यो एक शक्तिशाली मुलुक हो
विवाहित महिलाले भुलेर पनि लगाउन हुँदैन यी चिज,नत्र पति माथि आइपर्छ संकट !
मलाई देखेर थुक निल्छन भने मेरो के दोष
मध्यराति १२ बजे देखि ३ बजे सम्मको समयमा जन्मिएकाहरु कति भाग्यमानी ? हेर्नुहोस् !